इरानमा बोइङ्ग विमान दुर्घटना
३० पुस, काठमाडौं । इरानमा एक कार्गो बोइङ्ग विमान दुर्घटना भएको छ । बोइङ्ग ७०७ कार्गो विमान राजधानी तेहरानको कराज विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको द सनले लेखेको छ । यो विमान बिस्केकबाट किर्गिस्तानको पायमका उडेको थियो । विमानमा १० जना सवार
बंगलादेशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा हसिनाले सपथ लिँदै
पुस २३ गत्ते , ढाका बंगलादेशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेख हसिनाले सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने भएकी छिन्। गत डिसेम्बर ३० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट उनको दलले संसदमा बहुमत हासिल गरेसँगै हसिना पुनः प्रधानमन्त्री हुन लागेकी हुन्। शेख हसिनासँगै नयाँ मन्त्रिपरिषदको पनि सोमबार
रक्तदानमा चरम लापरवाही, गर्भवती महिलामा एआइभी
पुस १२ गत्ते,काठमाडौ । भारत तामिलनाडु राज्यका प्रदेश स्वास्थ्यसचिव जे राधाकृष्णले गर्भवती महिलालाई एचआइभी पोजेटिभ भएका व्यक्तिले रगत दिएको कुरा सामाचारमा बताएका छन । उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी एक गर्भवती महिलालाई यहाँको एक अस्पतालमा एचआइभी पोजेटिभ भएको रगत दिइएपछि उनी
आसाममा ‘रोड–रेल ब्रिज’, भारत भन्छ–चिनियाँ सीमामा सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आधार
पुस ११ गत्ते , बोगिविल । भारतले मङ्गलबार उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा रहेको सबैभन्दा लामो ‘रेल–रोड ब्रिज’ को उद्घाटन गरेको छ। पुलको सञ्चालनले भारतको चीनसँगको संवेदनशील मानिएको सीमानामा सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न नयाँ बाटो खुलेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रम्हपुत्र नदीमा बनाइएको
चीनमा अपहरणमा परेको बसले ठक्कर दिँदा ५ पैदलयात्रीको मृत्यु, २१ घाइते
पुस ११ गत्ते , बेइजिङ । चीनको पूर्वी क्षेत्र फुजियान प्रान्तमा मङ्गलबार अपहरणमा परेको बसले ठक्कर दिँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा २१ जना घाइते भएका छन्। चक्कूधारी व्यक्तिले चालकलाई चक्कु देखाई बसलाई अपहरण गरेर लाने क्रममा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३
अफगानिस्तानःमन्त्रालयको गेट नजिकै आत्मघाती बम विस्फोट, कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु
पुस १० गत्ते , काबुल । अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक मन्त्रालयको गेट नजिकै आत्मघाती बम विस्फोट गराइएको छ। घटनामा कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अफगान सरकारी अधिकारीका अनुसार मारिनेमा केही प्रहरीहरु समेत छन्। हमलापछि गरिएको
इन्डोनेसियाःसुनामीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३७३ पुग्यो
पुस १० गत्ते । इन्डोनेसियामा शनिबार आएको सुनामीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३७३ पुगेको छ । ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्ने आशंका गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा हराएका मानिसहरुको खोजी कार्य भैरहेको छ । इण्डोनेसिया सरकारका अनुसार सुनामी पछि कम्तीमा १४ सयभन्दा बढी
मेक्सिकोः विमान दुर्घटनामा गभर्नर र उनका श्रीमानको मृत्यु, ११ दिनअघि मात्रै पद सम्हालेकी थिइन्
पुस १० गत्ते । मेक्सिकोको पुएब्ला प्रान्तकी गभर्नर मार्था एरिका एलोन्सोको एक विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । उक्त विमान दुर्घटनामा उनका श्रीमान् सिनेटर राफेल मोरेनो वालेको पनि मृत्यु भएको छ । मार्थाले केही दिन अघि मात्रै गभर्नरको रुपमा कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । मेक्सिकाबाट
मोदीलाई फेसबुकमा गाली गर्ने पत्रकारलाई एक वर्षको जेल सजाय
पुष ५ गत्त, नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गाली गरी ‘फेसबुकमा सन्देश पोस्ट’ गरेको भन्दै भारतीय प्रशासनले एक जना पत्रकारलाई एक वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित सन्देशलाई लिएर पत्रकारलाई थुन्नुलाई आलोचकहरूले वाक स्वतन्त्रतामाथिको कठोर नीतिको पछिल्लो उदाहरण
ट्रम्पको विवादित पारिवारिक कोष बन्द
पुष ४ गत्ते , काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विवादित फेमिली च्यारिटी फाउन्डेसन बन्द हुने भएको छ । पारिवारिक कोषको रकम गैरकानुनी तरिकाले प्रयोग गर्दै आएको आरोप ट्रम्प र उनका छोराछोरीलाई लाग्दै आएको छ । यसबारे विवाद बढ्दै जान थालेपछि
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा रुसको संलग्नता एक रिपोर्टमा दाबी
पुष ०३ गत्ते,काठमाडौँ । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रभाव पार्न रुसले सबै महत्त्वपूर्ण सामाजिक सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेको एउटा रिपोर्टले दाबी गरेको छ।नयाँ अनुसन्धानले यूट्यूब, टम्ब्लर, इन्स्टाग्राम र पेपाल साथसाथै फेसबुक र ट्वीटर प्रचारप्रसार फैलाएर फाइदा लिनका लागि प्रयोग
पुष ०३ गत्ते,काठमाडौं । भारतको मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । १४७ जनालाई भने उद्धार गरिएको छ । उद्धारकार्य जारी रहेको बेला एक जनाको सिँढीमा लडेर र अन्य पाँच
भारतीय कांग्रेसका पूर्वसांसदलाई जन्मकैद
२ पुस, काठमाडौं । दिल्ली उच्च अदालतले भारतीय कांग्रेसका पूर्वसांसद सज्जन कुमारलाई जन्मकैद सजायँ सुनाएको छ । सन् १९८४ मा भएको शिख दंगाको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सज्जन कुमारलाई जन्मकैदसँगै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । ३४ वर्षअघि भएको
१ पुस,काठमाडौं । पहेंलो ज्याकेट विरोधकर्ताहरू शनिवार पनि पेरिस र फ्रान्सका अन्य शहरमा भेला भएका छन् । लगातार पाचौं सप्ताहान्तमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । मंगलवार स्ट्रासबूर्गको क्रिसमस बजारमा भएको आक्रमणपछि सरकारले विरोध रोक्न आह्वान गरेको भएपनि विरोधकर्ताहरूले टेरेनन् । तर
१ पुस, काठमाडौँ । अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका लागि नयाँ कदम एवम् फरक मार्गको खोजी गर्नुपर्ने चीनले जनाएको छ ।चीन–अफगानिस्तान–पाकिस्तान विदेशमन्त्रीहरूबीच भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्नुहुँदै चिनियाँ राज्य परिषद् सल्लाहाकार तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले भने, “शान्ति अफगानी जनताको चाहाना रहेको छ ।
महिन्दा राजापाक्षेले दिए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा
एजेन्सी/मंसिर २९ श्रीलङ्काका सशक्त नेता महिन्दा राजापाक्षेले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णय अवैधानिक रहेको फैसला गरेको भोलिपल्ट राजापाक्षेले राजीनामा दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राजापाक्षेका छोरा नमल राजापाक्षेले पनि बुवाले
भारतमा प्रसाद खाँदा ११ को मृत्यु, ७० बिरामी
मंसिर २९ गत्ते ,काठमाडौं । भारतको कर्नाटकमा मन्दिरको प्रसाद खाँदा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । करिब ७० जना बिरामी परेका छन् कर्नाटकको चामराजनगर जिल्लास्थित सुलाबाडी गाउँको किच्चुकुट्टी मारम्मा मन्दिरको प्रसाद खाँदा ११ को मृत्यु हो । ज्यान गुमाउनेमध्ये ३
मंसिर २९ गत्ते ,अहमेदावाद,भारत । भारतको एक अदालतमा एक्कासी चितुवा आहाराको खोजीमा भवनभित्र हिँडिरहेको देखिएपछि शुक्रबार अदालत परिसरमा केही समय त्रासको वातावरण फैलिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ’चितुवालाई देखेपछि अदालतका कर्मचारीहरू कार्यबक्षबाट भागी र कोठामा पुगेको चितुवालाई बाहिरबाट थुनेर हामीहरूलाई खबर भयो’,
उडिरहेको जहाजभित्र यौन हमला गरेको आरोपमा एक भारतीयलाई ९ वर्षको जेल सजाय
मंसिर २९ गत्ते । अमेरिकाको अदालतले जहाजभित्र आफू नजिकै बसेकी महिलामाथि यौनहिंसा गरेको आरोपमा एक भारतीय इन्जिनियरलाई ९ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । गएको जनावरीमा ३४ वर्षीय प्रभु राममूर्ती जहाजभित्र आफ्नी श्रीमती र पीडितको बीचमा बसेका थिए । पीडितका महिला निदाइरहेकी
मंसिर २५गत्ते,काठमाडौं । मानिसलाई पुनर्जीवनको आशा दिलाउने रुसी वैज्ञानिक डा. युरी पिचुगिनको दिमाग फ्रिजमा राखिएको छ । उनको दिमाग पछि पनि प्रयोग गर्ने उद्देश्यअनुसार माइनस १९६ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखिएको डेली मेलले जनाएको छ । डा. युरी पिचुगिनको ६७ वर्षको उमेरमा